I-Apple iceba ukuvula iziko loncedo lwabaphuhlisi eParis | Ndisuka mac
Ngokweendaba ezivela kwimithombo eyahlukeneyo yodumo lwaseFrance, I-Apple iyakuthathela ingqalelo ukuvula iziko loncedo lomphuhlisi kwiziko lobuchwephesha eParis. Yimodeli esetyenziswe yiApple, njengesifukamisi sezicelo kwaye, nakubaphuhlisi bexesha elizayo. Inkampani yenza ukuba iqela elincinci lifumaneke kubathathi-nxaxheba, elikhuthaza ukwenziwa kunye nokuqinisekiswa kwezicelo. Eli nyathelo lingena ngaphakathi kwimodeli ka-Apple: inkampani idala amaqela, kubaqulunqi bayizalisa ngomxholo. UApple ubeka imali yoluntu kunye neendlela onazo ukuze ufezekise usetyenziso lwentengiso.
Esi sicwangciso asisiyonto intsha kwiApple. Kunyaka ophelileyo yasungula iziko loqeqesho lwabaqeqeshi kuyo nayiphi na intsimi ukukhulisa ikhondo labo lomsebenzi kuyilo lwesicelo. Nangona kwinqanaba elincinci, esi sisicwangciso sika-Apple kwiziko lonjiniyela laseParis. Zimbalwa iinkcukacha ezisaziwa malunga nolwakhiwo olucacileyo oluya kuba nalo eli ziko loqeqesho le-Apple.
Nangona kunjalo, siyazazi iinkcukacha zesakhiwo. Iya kuba liziko elaziwa njenge Isikhululo F. Isithuba esivulwe ngoJuni ophelileyo, esineemitha zesikwere ezingama-34.000. Iziko linendawo efanayo yeenkampani zobungakanani be I-Facebook, iAmazon, iMicrosoft, Ubisoft, okanye iZendesk. Ezi zithuba "zizidleke" ze Startups, ngendawo efanayo yomsebenzi wentsebenziswano kunye nokunikezela ngezindululo zabo. Kule mimandla, kukho amagumbi ayi-100 asasazwe ngaphezulu kweetafile ezintathu zekhompiyutha.
Uluvo luvela kuzigidigidi otyale imali kule projekthi, emva kokuyibeka kumlawuli wenkqubo kaMicrosoft URoxanne Varza. Indawo leyo yenzeka kwindawo yokugcina iziporo zikaloliwe. Umtyalomali uthathe isigqibo sokusihlonipha isakhiwo. Le modeli ihambelana nezinye iindawo zeApple, apho kukho umahluko wesiko, kunye nezinto ezintsha zamva nje.
Iindaba ziphuma kanye ngala mhla I-CEO ye-Apple ityelele iNkulumbuso yaseFrance kunye nababoneleli abahlukeneyo benkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Apple iceba ukuvula iziko loncedo lomphuhlisi eParis